နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: ယောက်ျားသုံးဆေး အမေး
Q 1. I find myself that my organ is not long enough and decided to take some medicine and I found out some medicines from Internet and would you please advise me for those pills Xanogen and HGH factor. Please advise me for those two medicines and I should take or not.
Xanogen ဆေးအပါအဝင် ကျား-လိင်အင်္ဂါ ကြီး-ရှည်-သန်စေတယ်ဆိုပြီး ကြော်ညာတဲ့ဆေးတွေဟာ (အင်တာနက်) ရောင်းကုန်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ ရောင်းတာမျိုး မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ဆရာဝန်တွေက ဆေးကျောင်းတွေမှာ မသင်ခဲ့ပါ။ ဆေးစာအုပ်တွေထဲမှာလဲ မပါပါ။ အဲလို မသင်ရ-မပါတာတွေလဲ ဆရာဝန်တွေက ညွှန်တတ်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ သူများတွေ သုတေသန လုပ်၊ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ လုပ်ထားတာတွေကိုဖတ်ပြီး၊ လေ့လာပြီး။ ဆရာဝန်တွေ လက်ခံတာမျိုး လုပ်ကြပါတယ်
အခုလိုဆေးအမျိုးအတွက် သုတေသန နဲ့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေကို လိုက်ရှာတော့ ၂ မျိုးတွေ့လာတယ်။
(၁) ဆေးရောင်းသူတွေကတော့ ဝယ်ချင်လာအောင် ကောင်းတောတွေသာ ရေးထားတာ ဖတ်ရတယ်။
• Xanogen is really what starts to make your penis feel like its growing. This male enhancement pill is 100% all natural and safe to take with no side effects. Every day when you take this you can really see your penis transform and start to gain onlyafew days after you begin taking it. Really amazing and you've never felt anything like this before. Hurry and click the link below as free supplies are really limited and they could stop giving away Xanogen at any minute. Remember, they are 100% confident you will gain inches, they are going to send youarisk free 30 day supply of Xanogen. Just pay the few bucks to cover the shipping and you're set.
(၂) Q and A အမေး-အဖြေတွေမှာတော့ အတော် မတူကြတာမျိုးတွေ ဖတ်ရတယ်။
• Can xanogen and hgh factor grow or enlarge penis size?
• Can hgh injections enlarge your penis?
• no but they will af-u-c-k you up in every other way
• Do penis pumps enlarge the penis?
• Yes, but only temporarily. Once the blood flows out, it will return to normal size. However there are natural and herbal ways like traction devices, exercises, and pills etc and also surgical ways...
• Why do penis's enlarge?
• Because there isahot girl in front of you
• How will enlarge penis?
• There are essentially3penis enlargement methods that actually work: 1) Penis enlargement surgery - this method is doctor approved and recommended by most Urologists. Surgery can increase your penis...
Xanogen ingredients include traditional herbal aphrodisiacs like horny goat weed and muira puama (potency wood). These aphrodisiacs increase your sex drive and are especially important for men who are fighting with diminished libido due to aging or other issues. Ingredients like L-arginine and Gamma-Aminobutyric Acid, by contrast, are more recently discovered supplements that help increase circulation to the penis and stimulate production of hormones that produce strong feelings of arousal. Increasing circulation to the penis can encourage not only larger, more intense erections, but also can stimulate penis growth.
ဆေးထဲမှာပါတာတွေက လိင်အားပေးဘို့ လိင်စိတ်တိုးဘို့ အတွက်လို့ ဆိုထားတယ်။ လိင်စိတ် နည်းနေသူတွေအတွက်ကိုသာ ရည်ညွှန်းထားတယ်။ စောစောကရေးထားမျိုးထဲမှာ ၃ ပါတ်နေရင် ၃ လက်မ ပိုရှည်စေတယ်လို့ တမျိုးပါထားတယ်။ ဆေးအစွမ်းက ၂ မျိုးဖြစ်နေတယ်။
သူ့ထဲမှာ မပါတာတခုက -
Satisfied Xanogen customers report increased libido, stronger, harder erections and an overall more satisfying sexual experience. They also report penis growth afterafew months of using the product. Overall, Xanogen is an effective male enhancement product. However, foramore complete male enhancement product that stimulates penis growth and also includes yohimbe, Xytomax isabetter option.
FDA က အသိအမှတ်မပြုတဲ့ Yohimbe မပါဝင်ဘူးလို့ ဖတ်ရတယ်။ ဒီဆေးမျိုးက Erectile dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။
ခြုံပြီး ဆရာဝန်တဦးအနေနဲ့ ပြောရရင် ဘေးဖြစ်စေမှာတွေ ပါတယ်လို့ မတွေရပါ။ ညွှန်းလဲ မညွှန်းလိုပါ။ မသုံးနဲ့လဲ မတားပါ။ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးအတွက်တော့ ကြော်ညာမှာကို မပါပါ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ - ယောက်ျားသုံးဆေး အမေး
Posted by Hajee Than Hla Oo at 5:02 PM